पढ्नुहोस् सरकारी कर्मचारीबीच निकै चर्चित 'घुस्याहाको किस्सा
एक स्थायी सरकारी कर्मचारी निकै घुस्याहा रहेछ । जसरी हुन्छ घुस लिएरै छाड्ने । तर, चलाख पनि अचम्मको, प्रमाण कहिलै नछाड्ने । व्यापक जनगुनासो आयो । कारबाही गर्न कानुनलाई प्रमण चाहिन्छ, तर प्रमाण उसले कतै छाडेको थिएन । बर्खास्त गरिहाल्न पनि मिलेन । त्यसपछि जुक्ति निकालिएछ, जनसम्पर्क नै नहुने ठाउँमा कुनै काम दिएर सरुवा गर्ने ।
घुस लिन नपाओस् भनेर सरकारले उसलाई समुद्रको छाल गन्ने काम दिएर पठाएछ । दिनैपिच्छे छाल गन्नुपर्ने । ऊ छाल गन्दै थियो, त्यसैबेला एउटा ठूलो व्यावारिक जहाज उसको अघि आएर रोकिएछ । उसलाई के चाहियो र, थर्काएछ मज्जैसँग । ‘म सरकारले खटाएको मान्छे हुँ । सरकारले मलाई समुद्रको छाल गन्ने जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । तिमीहरुले डिस्टर्ब गर्‍यौ, अब राम्रो हुन्न । कि त केही व्यवस्था गर, होइन भने ….. !’ घुस खाएरै छाडेछ ।
यो पनि भएन । त्यसपछि उसलाई आकाशको तारा गन्ने काम दिइएछ । ऊ तारा गन्न थालेछ । यताबाट गन्दो रहेछ, उताबाट गन्दो रहेछ, तर सहरमा बनेका ठूला-ठूला भवनहरुले उसको काममा बाधा पुर्‍याएछन् । अनि घरमालिकलाई भेटेर भन्न थालेछ, ‘मलाई सरकारले तारा गन्न खटाएको हो । तिमीहरुले किन यति ठूलो घर बनायौ, मेरो काममा बाधा पुग्यो । यसो केही व्यवस्था गर्छौ भने ठिकै छ, नत्र …. !’ यहाँ पनि घुस । यस्ता सयौँ घरहरु थिए, ऊ त झन मालामाल ।
अब त अति भयो । त्यसपछि उसलाई घोडाको लिती (दिसा) जोख्ने काममा खटाइएछ । वायुपंखी घोडालाई त राशन चर्को हुने । दिसा जोख्दै गएछ । यत्तिकैमा उसले पत्ता लगायो, त्यहाँ त झन चर्को खेल पो हुँदोरैछ । घोडाको हिसाबले बराबर राशन आउने । तर खुवाउनचाहीँ कमसल राशन खुवाउने गरिँदो रहेछ । एकदिन बिहानै लिती जोख्न गएछ । एउटा घोडाले कम, अर्कोले बढी दिसा गर्‍यो । अब त उसलाई के चाहियो र, ठेकेदारलाई गएर सिधै थर्काएछ । ‘तिमीहरु को पारा के हो ? घोडाको राशनमा पनि मनलाग्दी गर्छौ ! बराबर राशन खुवाएको भए एउटाले बढी अर्कोले कम दिसा कसरी गर्छ ? म सरकारले खटाएको मान्छे हुँ । केही व्यवस्था गर्छौ भने ठिकै छ, नत्र गयौ तिमीहरु …. !’ यसले थापा पायो भनेर ठेकेदारको सातो गएछ । बरु मुख थुन्नु नै बेस, पैसा दिनै पर्‍यो … । त्यहाँ पनि घुस ।
सरकारको केही लागेन छ, अनि उसलाई पूरानै ठाउँमा सरुवा गरिएछ ।
(यो सरकारी कर्मचारीहरुबीच निकै चर्चित किस्सा हो । यतिसम्मको चलखेल हुनसक्छ भन्ने सन्देश दिन र नागरिकलाई सु-सुचित बनाउनका लागि नै यसलाई प्रकाशित गरिएको हो- सम्पादक)